रविन्द्र मिश्रको प्रेमपत्र उज्वल थापालाई : नयाँ यात्राका लागि शुभकामना !::kamananews
रविन्द्र मिश्रको प्रेमपत्र उज्वल थापालाई : नयाँ यात्राका लागि शुभकामना !
२८ पुस,२०७५ काठमाडौं । उज्जव थापाको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएपछि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ, जसले उनले छु्टिटएका मित्रहरुलाई प्रेमपत्र नाम दिएका छन् ।
फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको प्रेमपत्रमा मिश्र निकै भावुक बनेका छन् ।
छिटै बसेर चिया खाउँला । मिलेमा लामो समयदेखि जाने भनेर नगएको ओम आध्या रिसोर्ट जाउँला । के थाहा पुनर्मिलन भई पो हाल्छ कि । घाम भर्खर उदाएको अवस्था हो, बादल लाग्दैमा त्यसलाई अस्ताएको भन्न मिल्दैन। अन्यथा, हामीमा समयले लेराउने सुझबुझसँगै बाटो फेरी एकै ठाउँमा मिसिएछ भने सँगै यात्रा गरूँला । तपाईंहरूलाई नयाँ यात्राका लागि धेरैधेरै शुभकामना ! सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् !स्रोत : www.onlinekhabar.com